I-Safari ye Windows 10 - Ukulanda Okusemthethweni Kuyatholakala? - Ama-Softwares
Ngokuncintisana okunempilo emakethe yesiphequluli, i-Chrome, iSafari, neFirefox sekube ngaphezulu kweminyaka eyishumi manje. Abasebenzisi abaningi banezizathu zabo zokukhetha isiphequluli kungakhathalekile uhlelo olusebenzayo. I-Apple ine-fanbase enkulu, futhi abasebenzisi bafuna ukuzama ukusebenzisa imikhiqizo yabo ukwazi ukuthi i-hype imayelana nani.
Abasebenzisi abaningi basebenzisa iSafari njengesiphequluli sabo esikhulu. Lokhu kungenxa yobumfihlo obukhulu nezici ezikunikezayo. I-Safari yamawindi ime isikhathi eside emuva. Kule bhulogi, sizokutshela ukuthi kungani.
I-Safari Windows 10 - Umlando
ISafari ayizange iqale ngokungahleliwe ngamawindi. Kunendaba ende ngemuva kwalokhu. UDave Hut yigama elikhulu elaqhamuka neMozilla Firefox nomlingani wakhe, futhi lapho wazi ukuthi i-Apple inomsindo, bekusobala ukuthi kunento enkulu ezophuma.
Isiphequluli se-safari senziwa ngokufihla okugcwele; akekho owayazi noma yini, konke kwenzeka ngemuva kweminyango ekhiyiwe, futhi lapho kuphuma, kwaba nomthelela omkhulu. Njengoba labo ababekade besebenza bekhumbula, akekho umsebenzi ojwayelekile owazi lutho ngokwenzeka ngemuva kwalezo zicabha ezikhiyiwe; babengenalo nhlobo ulwazi ngomthelela omkhulu owawuzokwakhiwa.
ISafari idalelwe ukuxhasa wonke amadivayisi we-Apple, kepha bese isidedela isiphequluli samawindi. Ngo-2007, iSafari yayifinyeleleka nakumawindi. Isizathu esiyinhloko sokukhishwa kweSafera emafasiteleni kwakuwukunikeza umncintiswano oqondile kumhloli wamazwe we-inthanethi, isiphequluli esiphezulu emuva ngaleso sikhathi.
Ungayilanda Kanjani i-Safari yeWindows?
Ukulanda i-Safari yamawindi akuyona i-rocket science. Kulula impela, futhi kufanele ngikutshele ukuthi, uma usulandiwe, uzothola kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Sikunikeze isixhumanisi sokulanda i-Safari.
Ungachofoza kufayela le- isixhumanisi , faka, bese usebenzisa isoftware ukuyilanda.
I-Safari ye-Windows - Ukubukeka kokuqala
Siyazi ngeqiniso ukuthi i-Apple inabalandeli abalandelayo, futhi noma ngabe bathola ukusikisela okuncane kwalokho okuzayo ngokuzayo, bayaxokozela. Kodwa-ke, bekungenjalo ngeSafari. Kwasetshenzwa ngasese ngaphambi kokwethulwa kubalaleli. Ngo-2007, uSteve Jobs wamemezela ngokusemthethweni ukwethulwa kweSafari yeWindows XP neWindows Vista. Kube yisinyathelo esihle ukungena emakethe entsha, lapho kunomncintiswano onempilo.
Kuyajabulisa ngempela ukwazi ukuthi izilaleli zamukele iSafari ngenjabulo. Babemagange ukwazi nge-hype ye-Apple futhi bafuna ukusebenzisa isiphequluli. Usuku eyakhishwa ngalo kwakungu-11 Juni 2007. Kodwa-ke, ngoMeyi 2012, bayeka ukuxhasa iSafari ngamawindi. Umbuzo omkhulu lapha uthi, kusenokwenzeka yini ukusebenzisa iSafari kumawindi? Uzokwazi ngemuva kokufunda yonke le ndatshana.
Isiphequluli seSafari - Izinzuzo nezinkinga
Akunandaba noma yini okubuyekezwayo noma okuhloliwe, abasebenzisi bahlala befuna ukwazi okuhle nokubi. Akumangalisi ukuthi ngisho iSafari ithole isethi yayo yezinzuzo nobubi. Inzuzo enkulu kakhulu yeSafari yeWindows ifike nohlobo lwayo lwesihlanu. Bangene esicini lapho kufundwa khona izindaba. Bavunyelwe futhi ukuvumela izandiso zangokwezifiso, okwenza kube isiphequluli esincintisana eduze neFirefox.
Futhi zivumela izengezo zokusekelwa ukuvimba izikhangiso zakho. Kodwa-ke, isici se-safari esisezingeni eliphezulu kunazo zonke esasinaso ngamawindows kwakuyikhono lokusebenzisa ama-plugins nezandiso. Akukho okuningi okuzokhulunywa ngobubi; Okubi kakhulu yi-Apple eyeka isiphequluli se-Safari samawindi. Ezinye iziphequluli ezinjenge-chrome neFirefox zisebenza ngokugcwele, futhi ungazisebenzisa ngokuzikhandla ngezibuyekezo ezijwayelekile.
Ukuphela kohambo lwe-safaris ngeWindows!
Kunzima ngempela ukwazi ukuthi kungani iSafari bekufanele ihlukane namawindi; kunamahemuhemu amaningi, ukucabanga okuningi okukhona. Abanye bathi kungenxa yokuthi i-apula alikwazanga ukuncintisana emakethe neziphequluli ezikhona, kanti abanye bathi bekuwukuheha abasebenzisi kuma-macOS, ahlulekile. Ngaphandle kokwazi ukuthi i-Apple ayiphumelelanga emakethe yamawindi, kuyaziwa ukuthi iSafari yisiphequluli esesabekayo esigxile kwejubane nobumfihlo.
Ukubuyekezwa kweSafari yeMac:
Iziphequluli ezakhelwe ngaphakathi ze-Apple, iSafari ingenye yeziphequluli ezihamba phambili nezaziwayo. Isebenza njengesiphequluli esijwayelekile samadivayisi we-apula selokhu yakhululwa ngo-2003. I-Apple inerekhodi elihlanzekile kakhulu lezindaba zobumfihlo, kanti iSafari kungenzeka ingabi isiphequluli esisebenziseka kalula njengabaningi, kepha ikunikeza ilungelo ubumfihlo obudingayo.
ISafari inezici eziningi, kepha okuyiyona nto enkulu ukuthi okwamanje itholakala kuphela kumadivayisi we-Apple. Inikezwe izilinganiso ezinhle kakhulu zokusebenza ngabasebenzisi. ISafari futhi inezici ezinhle zokuphepha nobumfihlo, okwenza kube isiphequluli esithembekile.
1Q. Ngingayilanda i-Safari kumawindi?
Iminyaka:Yebo, kepha ungalanda inguqulo yesi-5 yeSafari hhayi inguqulo yakamuva.
2Q. Ngabe iSafari yamawindows imahhala?
Iminyaka:Yebo, inguqulo etholakalayo yamawindows inguqulo 5, emahhala kubasebenzisi.
3Q. Ingabe i-Safari ye-Windows Safe?
Iminyaka:Ukugxila okuyinhloko kweSafaris kwakuwukunikeza isivinini sokugcina nobumfihlo kubasebenzisi; ngokungafani ne-chrome, enezici ezeqile, iSafari inikezela ngejubane elihambisanayo nobumfihlo.
ISafari yeWindows iyindlela enhle uma ufuna isiphequluli esinokusebenziseka okulula komsebenzisi esikunikeza ubumfihlo obukhulu nesivinini. Abasebenzisi abashintsha besuka kwi-MacOS baya kumawindi bangaqhubeka nokusebenzisa iSafari njengesiphequluli esihle. Ukwazi okwengeziwe ngeSafari yamawindi, sibuze imibuzo yakho ebhokisini lethu lengxoxo ngezansi. Siphinde sivulekele impendulo neziphakamiso zakho.
Ungayibuka Kanjani i-Hotstar e-USA?